Health | Great Arakan | Page 11
Home Health Page 11
ကျော်ဝင်း ခိုင် - January 13, 2022
ကျော်ဝင်း ခိုင် - July 14, 2021
တင်တိ လုံးပနာ မောက်တက်လာဖို့
Health ကျော်ဝင်း ခိုင် - November 27, 2017 0
တခု ကရိယာလည်း မလို အိမ်မှာ ကဇတ်နိုင်ရေ လေ့ကျင့်ခန်း အမျိုး ၆၀
ကဇတ်တေ နည်းလမ်းနန့် သက်ရောက်တေ ကြွက်သားနိန်ရာတိကို ဘေးမှာ ချိန်တွဲ ပြထားပါရေ။
Health ကျော်ဝင်း ခိုင် - November 24, 2017 0
ယောကျာ်း၊ မမက် အားလုံး အရွယ်ရောက်ကေ ဆံပင် ကျွတ်တတ်ကတ်ပါရေ။ ဆံပင် အများကြီး ကျွတ်တတ်တေ လူတိ တခါတရီမှာ လူတော မတိုးဝံ့ဖြစ်လားတတ်ပနာ၊ စိတ်ဓါတ်လည်း ကျလားတတ်ကတ်ပါရေ။ ဆံပင်ပေါက်ဆီးဆိုပနာ စျီးကကြီးနန့် ရောင်းကတ်တေ ဓါတုပစ္စည်း အများစုကလည်း ရေရှည်သုံးဖို့ မသင့်ပါ။ အမှန်တကယ် ဆံပင် ပြန်ပေါက်ဖို့...
မျက်နှာက အစက်တိ ၃ ညဥ့်နန့် ပျောက်ချင်လာ?
Health ကျော်ဝင်း ခိုင် - November 22, 2017 0
မျက်နှာက အစက်အပြောက်တိကို ပျောက်ဖို့ အတွက် အဓိက ဇာတ်လိုက်က အာလူ အစိမ်း ၁ လုံး ပါ။ အောက်က နည်းလမ်းတိထဲက တခုခုနန့် လုပ်နိုင်ပါရေ။ ၁) အာလူစိမ်း ၁ လုံး + ဆီးသံဖရာ ၁ ခြမ်း အရည် အာလူ အစိမ်း...
ဝက်ခြံ၊ တင်းတိတ်၊ အမာရွတ်တိ ပျောက်ချင်လာ?
Health ကျော်ဝင်း ခိုင် - November 21, 2017 0
လိုအပ်စွာတိ - ၁) ပျားရည်အစစ် ၁ ဇွန်း ၂) ချက်ချင်း ညှစ်ထားရေ သံဖရာရည် ၁ ဇွန်း ၃) ချက်ချင်း အမှုန့်ကြိတ်ထားရေ ဇာတိပ္ဖိုလ်သီး ၁ ဇွန်း ၄) အမှုန့်ကြိတ်ထားရေ ကရဝေး/သစ်ကြံပိုးခေါက် ၁ ဇွန်း အညွှန်း - ၁) ခွက်တခွက်မှာ အထက်က ပြောထားရေ ၄...
ရင်သား အကြည့်ခံရစွာကို ဂျာမန်တိ သည်းခံမှု အရှိဆုံး
Health ကျော်ဝင်း ခိုင် - November 11, 2017 0
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နိုဗန်ဘာ ၁၁ ရက် - ဟိုလီးဝုဒ် မင်းသမီးတိ အများကြီးကို မဖွယ်မရာ လုပ်ခရေ ဟာဗီး ဝိန်ဆတိန်း Harvey Weinstein အကြောင်းနန့် ဆက်စပ်ပနာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ မဖွယ်မရာ စော်ကားခံရစွာနန့် ပတ်သတ်လို့ ဇာပိုင် အစော်ကားခံရစွာကို ပြပြင်းထထန်...
အနာဂတ်မှာ လူတိ မအို မသီဗျာလ်?
Health ကျော်ဝင်း ခိုင် - November 9, 2017 0
လူ့ခန္ဓာကိုယ်က ရင့်နိန်ရေ ဆဲလ်ဟောင်းတိကို ပြန်နုပျိုလားအောင် လုပ်နိုင်ရေ နည်းလမ်းတခုကို သိပ္ပံပညာရှင်တိ မမျှော်လင့်ဘဲ တွိလိုက်ရပါရေ။ အေတွိရှိချက်က လူ့အသက်အရွယ်ကို ပြောင်းလဲနိုင်ရေအတွက် ကကောင်း စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ကောင်းပါရေ။ အစ်ဇီတာ တက္ကသိုလ် (University of Exeter) နန့် ဘြိုက်တွန် တက္ကသိုလ် University of...
ရခိုင်ပြည်မှာ ကင်ဆာရောဂါ ဖြစ်ရရေ ရင်းမြစ်တခု
Health admin - October 8, 2017 1
ရခိုင်ပြည်ထဲမှာ လွန်ခရေ နှစ် ၃၀ ကျော်လောက်က ရှရှားပပါး တွိဖူးရေ ကင်ဆာရောဂါစွာ အဂု အချိန်မှာ ထိပ်ဆုံး အဆင့်ကို ရောက်လို့နိန်ပါဗျာလ်။ အံ့သြစရာတော့ မဟုတ်ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံစွာ တကဗာလုံးမှာ ဒုတိယမြောက် ကင်ဆာရောဂါ အဖြစ်ဆုံး အုပ်စုဝင်နိုင်ငံပါ။ အာရှမှာ ပထမ ကင်ဆာရောဂါ...
ကိုယ်ဝန် – ဆောင်ဖို့လား၊ ရှောင်ဖို့လား
Health admin - October 8, 2017 0
အကြောင်းအရာ တခုကို ဃဃနန မသိဘဲ လုပ်ကတ်တေခါ ယင်းအလုပ်စွာ ခက်ခဲပနာ လွှဲမှားတတ်ပါရေ။ တခါတခါ ပြဿနာ တပုံတခေါင်း ပေါ်လာတတ်ပနာ အသက်ကို ခြိမ်းခြောက်လာရေ အခြေအနေထိ ကြုံလာတတ်ပါရေ။ ယင်းအတွက်နန့် ဇာအလုပ်ကို လုပ်လုပ်၊ မလုပ်ခင် ယင်းအလုပ်ကို ဃဃနန နားလည်အောင် ကြိုးစားပါ။ ကိုင်း...